67 Ha Avaratra : Olona telo nahatrarana héroïne tao an-trano fivarotan-toaka | NewsMada
67 Ha Avaratra : Olona telo nahatrarana héroïne tao an-trano fivarotan-toaka
Voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina Anosy tao an-trano fivarotan-toaka iray eny 67 ha Avaratra, ny alatsinainy lasa teo ireo lehilahy roa nivarotra vovoka héroïne sy ny ramatoa iray tompon’ilay zava-mahadomelina…
Nahazo loharanom-baovao ny polisy nilaza fa misy lehilahy mivarotra héroïne eny 67 ha Avaratra tamin’io fotoana io. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy ka nanao ny vela-pandrika rehetra ahafahana misambotra ireo olona tompon’antoka amin’izany. Vokany, tratra teo am-pivarotana héroïne milanja 4 grama sy sasany ny tovolahy roa. Rehefa nohadihadian’ny polisy izy roa lahy ireo dia nilaza fa mpivarotra ihany fa tsy tompony ary nanondro tao amin’ny trano fivarotan-toaka iray eny en-toerana izay voalaza fa fakan’izy ireo ny entana. Notadiavin’ny polisy ny tompon’io trano fivarotan-toaka io ka tratra tao ny renim-pianakaviana iray 48 taona tompon’ilay toeram-pivarotana. Nentin’ny polisy avy hatrany ilay renim-pianakaviana hanaovana famotorana. Fantatra taorian’ny famotorana natao fa renin’ilay tompon’ny héroïne ity renim-pianakaviana ity fa ny zanany kosa no tena tompony.
Nohamafisin’izy roa lahy mpivarotra tratra voalohany fa fantatr’ilay renim-pianakaviana tsara ny fisian’ny zava-mahadomelina ao an-tsenany ary fantany koa fa ny zanany no tompony sy mpanakarama ireto roa lahy mpivarotra ireto. Izany rahateo no itazonana azy amin’izao raharaha izao, araka ny fanazavan’ny polisy. Nilaza ireto olona voasambotra ireto fa vao volana maromaro izay no nanaovan’izy ireo ity asa fivarotana héroïne ity.
Amidin’izy ireo 10 000 Ar ny 0,10 grama ary 80 000 Ar kosa ny 1 grama. Voalazan’izy roa lahy hatrany fa 10 000 Ar ny karama isaky ny manatitra vidin’entana.